500 oo dad danyar ah oo loo qeybiyay lacag ay ku afuraan-Sawirro – Radio Muqdisho
Dadkan naafada ah oo maanta shirkada Hormuud foundation ay u qaybisay deeqda lacagta ah ayaa waxaa ay gaarayaan 500 oo ruux waxaana qofkiiba la siiyay 100 Dollar oo cadaan ah iyadoo mas’uuliyiinta Hormuud Foundation ay ku sugnaayeen goobta. Kulan lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa dadkaan naafada ah lagu gudoonsiiyay lacagtaan oo gaareysay 50 kun oo doolar waxaana aad uga mahad celiyay caawinaada Hormuud Foundation dadka masaakiinta ah ee lacagta ay shirkadu siisay.
Maamulaha waaxda samafalka ee Hormuud foundation Muuse Axmed Nuur oo ka hadlay deeqdaan ay dadka naafada ah siiyeen sheegay in muhiimadoodi ay tahay in shirkadaha kale iyo ganacsatadu ku daysadaan oo la caawiyo dadka naafada ah.
“Maanta waxay meeshaan isugu keentay shan boqol oo qof oo isugu jirta naafada nuucayadeeda kala duwan oo indhoolayaasha ama dadka araga la’ iyo dadka xubnaha la’ shantaa boqol oo qof insha’alaahu waxaan maanta siineynaa qofkiiba 100 dollar oo aan ugu talo galnay in uu ku afuro”. ayuu yiri Muuse.
Shirkada Hormuud waxaa ay ka mid tahay shirkadaha ganacsi ee sida garka ah loo leeyhay ee mar walba la arko iyagoo garab taagan oo cawinaya dadka dhibanayaasha ah waxaana horay ay u gaarsiiyeen gar gaar Maxaabiista xabsiga dhexe ee Xamar ku jirta iyo naafada xoogga dalka ee ku jirta isbitaalka Martiini.